Ku cusbooneysii qoraalka Samsung Galaxy note 2 Android Lollipop | Androidsis
Kadib markaan idinla wadaago dhamaantiin sida loo cusbooneysiiyo, si rasmi ah loollipop-ka Android, Samsung Galaxy Note 3, hada waa markiisa walaalkiis Samsung Galaxy Note 2In kasta oo Samsung horeyba dhinac uga dhigtay xagga cusbooneysiinta rasmiga ah, nasiib wanaag weli waxaan haynaa shaqada horumariyeyaal madax-bannaan oo ka dhigaya terminalkan mid suurtagal ah in lagu cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeya ee Android qaabkiisa ugu nadiifsan.
Marka waad ogtahay, hadaad rabto inaad ogaato sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 2 ilaa Android Lollipop, Waxaan kugula talinayaa inaadan seegin qoraalkan aan ku wadaagi doono dhammaan faylasha lagama maarmaanka u ah biligleynta iyo cusbooneysiinta xarunta, iyo sidoo kale habka rakibaadda ee tallaabo-tallaabo oo faahfaahsan.
Kahor intaadan bilaabin howsha biligleyga Samsung Galaxy Note 2, moodal N7100, waa inaad ogaataa in Romkan uu wali kujiro horumar la tixgaliyay Alpha, inkasta oo si caadi ah loogu isticmaali karo isticmaalka maalin kasta ee terminalka.
Waxyaabaha sida kamaradda asalka ahi ma shaqeeyaan, in kasta oo ay ku xidhan tahay rakibidda fudud ee kamaradda Google ka dukaanka Google u gaar ah ee Play Store, runtiina waxay tahay in dalabku qaato sawirro waaweyn.
3 Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note tallaabada Android Lollipop talaabo talaabo ah
Samsung Galaxy Note 2 Xididaysan oo leh dib-u-habeyn la beddelay oo la rakibay.
Dib-u-habeynta ha lagu beddelo noockeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
Nandroid Backup nidaamka hadda jira oo dhan
Batariga ayaa lagu dalacay 100 × 100
Sidoo kale kahor intaadan rakibin ROM-kan Android Lollipop, waa inaan gab lambarka SIM PIN oo geli ammaan la'aan. Tani aad ayey muhiim u tahay tan iyo markii Romkan uu leeyahay Dhiqle loo yaqaan SIMLock in ma aqbalayo lambarka SIM PIN oo haddii aan hawlgalinay waa tirtiri doontaa waana inaan galnaa koodhka PUK si aad u awood ugu yeelatid inaad gashid SIM-keena.
Sidoo kale kahor intaadan bilaabin nidaamka biligleynta ama habka rakibida, waa lagugula talinayaa ka saar SIM-ga oo samee iyada oo aan kaarka la gelin, tani macquul ahaan marka lagu daro curyaaminta nambarka SIM PIN.
Android Lollipop Rom ee Samsung Galaxy Note 2
Gapps Android 5.0 hurdiga ah
SuperSU Android hurdiga ah
Marka saddexda feylood ee la isku adkeeyay oo qaab zip ah la soo dejiyo, Iyadoo aan hoos loo dhigin waxaan u guurineynaa xusuusta gudaha ee Samsung Galaxy Note 2 oo aan ku cusbooneysiin doonno Android Lollipop. Kadibna, waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan dib u bilowno boosteejada habka Soo-kabashada oo aan raacno tilmaamaha biligleynaya ee aan si faahfaahsan ugu talaabsanayo tallaabada hoose:
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note tallaabada Android Lollipop talaabo talaabo ah
Mar ku soo galay Mode RecoveryXusuusnow in ay tahay in loo cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeya ee la heli karo, kaliya waa inaan raacnaa tilmaamahan biligleynaya ee fudud:
Jaranjarooyinka iyo keydinta iyo waxaan qaabeyneynaa nidaamka
Xulo Zip oo xulo zipka Rom-ka oo xaqiiji rakibideeda.
Mar labaad dooro zip ka dibna iftiimi zipka Gapps Android Lollipop
Xulo hal mar oo dheeri ah ka dibna iftiimiso zipka SuperSU.
Advised / tirtir dalvik khasnado
Waxaan si dulqaad leh u sugeynaa Samsung Galaxy Note 2 oo aan hadda u cusbooneysiinay nooca ugu dambeeyay ee Android 5.0 Lollipop si dib loogu bilaabo. Waxaan u leeyahay samir maxaa yeelay waxay qaadan kartaa inta udhaxeysa toban daqiiqo ama rubuc saac si loo bilaabo nidaamka markii ugu horeysay.
Markaa waxaan kaliya u baahanahay inaanu xisaabtano xisaabaadkayaga iyo isku xirnaanshaheena oo aan ku raaxeysanno noocaan cusub Naqshadeynta Qalabka Android ee Samsung Galaxy Note 2.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 2 ilaa Android Lollipop
Kaamiradu aniga iima shaqeyso, waxay igu dhaheysaa "ma dhisi karo xiriirka kaamerada" fadlan i caawi, horay ayaan u sameeyay waxaad dhahdo bilowgii mana aysan ii shaqeyn.
Kuranku Salomone dijo
Roomaani waxay leedahay cilado dhowr ah.
Mid ka mid ah ayaa ah in kiiboodhka asalka ah uusan shaqeyneynin ama uu ka baxsanyahay xadka shaashada.
Waxaan ku qasbanaaday inaan adeegsado kumbuyuutar banaanka ah oo loo maro 'OTG' si aan u rakibo dhinac saddexaad (SwiftKey) waxayna u muuqataa banaanka shaashadda hoose. Nasiib darrose, tan looma qaybin karo qayb kasta oo shaashadda ah ama qaabeynta kumbuyuutarka.
Guuldaradii labaad, marka aad bilaabeysid mobilka (marka lagu daro bilig-yeelidda geedka kirismaska) waxay siineysaa Launcher3 guuldarro -> "Nasiib darro, Launcher3 wuu istaagay".
Seddexaad, markii aad bilaabeysid kamarada waxaa ku dhagan qeybta "Ku dhaji sawiradaada meesha" taleefankuna wuu fariisanayaa, taas oo kugu qasbeysa inaad gacanta dib ugu bilowdo.
In kasta oo xaqiiqda ay tahay nooc aad u qabow oo muuqaal ahaan raalli ka ah, haddana waxaan ku laabanayaa KitKat oo waxaan sugayaa mid deggan.
Waad ku mahadsantahay sidoo kale wax ku biirinta.
Jawaab Ƒranku Salomone
Wax dhibaato ah ma kaa soo gaadhay Wi-Fi? Mar kasta oo aan isku dayo inaan isku xiro waxaan helayaa qalad xaqiijin ah iyadoo aan loo eegin shabakadda aan doonayo inaan ku xirnaado.
Jawaab Mauricio Delgado
Google wuxuu doortaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee Android ee 2014